Sat, Aug 18, 2018 | 02:12:06 NST
एनिमेशन प्रोपोगाण्डा : उत्तर कोरियाले गर्‍यो अमेरिकाको राजधानी नष्ट !
चैत १४ – उत्तर कोरियाले अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा परमाणु आक्रमण गरेको छ । तर यो वास्तविक भने होइन । उत्तर कोरियाले एक एनिमेटेड भिडियो जारी गरेको छ, जसमा परमाणु आक्रमण मार्फत अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी नष्ट गरेको देखाइएको छ ।
फोटोसपबाटै विश्व घुम्ने महिला
चैत १३ – केन्याकी एक महिलाले फोटोसपकै मद्दतले विश्वका धेरै ठाउँ घुमेकी छिन् । घुम्न रुचाउने केन्याकी एक महिला आफ्नो शौख पूरा गर्ने अनौठो तरिका निकालेकी हुन् । उनले फोटोशपको मद्दतले अरु व्यक्तिको भ्रमणको तस्बिरमा आफ्नो तस्बिर मिलाएर फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्ने गरेकी छन् ।
राजकुमारको हिरा चोर्ने मान्छे बौद्ध भिक्षु बने
चैत ५ - तीन दशक पहिला साउदी अरबमा राजकुमारको बहुमूल्य हिरा चोरी गर्ने व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनेका छन् । उनले आफ्नो कर्मको सुधारका लागि भन्दै भिक्षु बनेको बताएका छन् ।
चाेर बने भिक्षु
चैत ५ – तीन दशक अगाडि साउदी राजकुमारको बहुमूल्य हिरा चोर्ने चोर भिक्षु बनेका छन् । प्रहरीले चाेरलाई पक्राउ गरेर सबै गरगहना बरामद गरेपनि निलो हिरा भने फेला परेको थिएन ।
फुटबल खेलाडीले गिलासमा पिसाव गरे
चैत ४ – बेलायतको चेल्टनहम महोत्सवको क्रममा च्याम्पियनसिप क्लब एमके डनसका मिडफिल्डर समिर कराथर्स र नर्थह्याम्प्टन टाउनका स्ट्राइकर जेम्स कोलिन्सले जुसको गिलासमा पिसाव गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनीहरुको तीब्र आलोचना भएको छ ।
दुई वटा लिङ्ग हुने पुरुषकाे हजार यौन साथी
चैत ३ – अमेरिका एक युवामा अनौठो समस्या देखिएको छ । अमेरिकाको उत्तरी कोस्टका एक २५ वर्षका युवाको दुई वटा लिङ्ग छ । उनका दुई वटै लिङ्ग सामान्य अवस्थामा छन् ।
एउटै कुकुरको दुई वटा नाक
चैत ३ – अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा दुई वटा नाक भएको कुकुर फेला परेको छ । क्यालिफोनिर्याको फ्रेसनोमा बाटोमा भौँतारिएको दुई वटा नाक भएको कुकुरलाई पशु उद्दारमा घटिएको टोलीले उद्दार हो ।
आँखाबाट आँसुको साटो रगत बग्ने किशोरी
चैत २ – बेलायतकी एक किशोरीमा नराम्रो स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । १७ वर्षकी किशोरी मानी रे हार्वी आँखाबाट आँसु जस्तै गरे लगातार रगत बग्ने समस्याबाट पीडित भएकी छन् । कुनै डलराग्दो विषय समेटिको चलचित्र (हरर मुभी) का पात्रको जस्तै उनको आँखाबाट लगातार आँसुको साटो रगत बग्ने गरेको छ ।
परीक्षामा पास हुन रातो कट्टु
फागुन २९ – परीक्षा नजिकको समयमा विद्यार्थी तनावमा रहन्छन् । यस्तो बेला विभिन्न देशका विद्यार्थी तनावलाई कम गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने गर्दछन् । त्यस्ता उपायले परीक्षाका बेला विद्यार्थीलाई तनावबाट मुक्ति दिलाउनुका साथै नतिजा पनि राम्रो आउने विश्वास गरिन्छ ।
जुम्ल्याहा बच्चाका बाबु फरक फरक !
फागुन २७ – भियतनाममा जुम्ल्याहा बच्चाका बाबु फरक फरक रहेको पुष्टी भएको छ । डिएनए परीक्षणबाट जुम्ल्याहा बच्चाका बुबा फरक फरक रहेको तथ्य खुलेको स्थानीय आनुवंशिक एशोसिएशनले जनाएको छ ।
पूर्व वायुसेना प्रमुखले २१८ करोड चोरे
फागुन २५ – नाइजेरियाका एक पूर्व रक्षा प्रमुखमाथि वायु सेनाको दुई करोड अमेरिकी डलर (दुई अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ) चोरेको आरोप लागेको छ । सेना निवृत्त एयर चिफ मार्शल एलेक्स बादेहमाथि दुई करोड डलर चोरी गरेको सहित विभिन्न १० मुद्दा लागेको हो ।
ह्वाइट हाउस छोडेपछि कहाँ बस्छन् ओबामा ?
फागुन २३ – आउँदो नोभेम्बरमा त्यहाँ नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ । नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि आहिलेका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ह्वाइट हाउस छोड्नु पर्ने हुन्छ । ह्वाइट हाउस छोडेपछि ओबामा कता जानुहुन्छ त ?
बजारमा जंगली भेडाको आतंक
फागुन २२ – न्युजिल्याण्डको एक बजारमा जंगली भेडाले आतंक मच्चाएका छन् । न्युजिल्याण्डको साउथ आइल्याण्ड टापुको बजारमा प्रवेश गरेका १६ वटा जंगली भेडाको समूहले त्यहाँ आतंक मच्चाएका हुन् ।
८४ वर्षमा चौंथो विवाह !
फागुन २२ – अमेरिकी सञ्चार उद्यमी रुपर्ट मर्डोकले फेरि विवाह गरेका छन् । सञ्चार उद्यमी मर्डोकले ८४ वर्षको उमेरमा चौंथो विवाह गरेका हुन् । मर्डोकले ५९ वर्षकी अभिनेत्री तथा मोडल जेरी हलसँग विवाह गरेका हुन् ।
नाङ्गो भएपछि मात्रै परीक्षा दिन पाइने !
फागुन १९ – भारतको बिहारमा परीक्षार्थीलाई कपडा खोल्न लगाएर परीक्षामा सामेल गराइएको विषय विवादमा तानिएको छ । सेनामा भर्तीका लागि आवेदन दिएका युवालाई लिखित परीक्षामा कपडा खोल्न लगाएको विषय विवादमा तानिएको हो ।
​कतारी अमिरलाई नवाज सरिफको उपहार गाई र गोरु
काठमाडौं, फागुन १७ – पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले कतारी अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई गाई र गोरु उपहार पठाउनुभएको छ ।
इजिप्टका राष्ट्रपतिको मूल्य एक लाख डलर
फागुन १३ – इजिप्टका राष्ट्रपतिलाई किन्नका गर्नका लागि एक लाख डलरको मूल्य तोकिएको छ । लिलामी सम्बन्धी वेब साइट ‘इबे’ मा राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसीको मूल्य एक लाख डलर तोकिएको हो ।
विमानस्थल जाँदा पासपोर्ट भूल्ने फुटबल खेलाडी
फागुन १३ – स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका स्ट्राइकर लुइस स्वारेजले च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत प्रिक्वाटर फाइनलको पहिलो लेगका लागि आर्सनलको मैदान जानका लागि विमानस्थल जाँदा पासपोर्ट लैजान बिर्सिए । तर महत्वपूर्ण समयमा पासपोर्ट बिर्सने पहिलो फुटबल खेलाडी भने होइनन् ।
रेफ्रीलाई रातो कार्ड देखाउने खेलाडीको समर्थनमा प्रदर्शन
फागुन ११ – टर्किस सुपर लिगको एक खेलको क्रममा रेफ्रीलाई रातो कार्ड देखाउने खेलाडीको पक्षमा समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन् । टर्किस क्लब ट्राबजोन्सस्पोर्सका खेलाडी सालेही दुर्शुनले रेफ्री दिनेज बिट्नेललाई रातो कार्ड देखाएका थिए ।
कपालको मूल्य ३८ लाख !
फागुन १० – निकै लोकप्रिय रक ब्याण्ड बिटल्सका संस्थापक सदस्य तथा चर्चित गायक जोन लेननको कपालको एक गुच्छा ३५ हजार डलर अर्थात ३८ लाख भन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँमा बिक्री भएको छ ।
अस्ट्रेलियाका पूर्व क्रिकेटर सेन वार्नलाई एनाकोन्डाले टोक्यो
फागुन ७ – अस्ट्रेलियाका पूर्व क्रिकेटर सेन वार्नलाई एनाकोण्डा सर्पले टोकेको छ । एक टेलिभिजन रियालिटी शोको क्रममा वार्नलाई एनाकोन्डा सर्पले टाउकोमा टोकेको हो ।
भेनेजुयलामा पेट्रोलको मूल्य ६००० प्रतिशतले बढ्यो
फागुन ७ – ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुयलामा २० वर्षमा पहिलो पटक पेट्रोलको भाउ बढेको छ । भेनेजुयला सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ० दशमलव ०१ डलर अथार्त झण्डै एक रुपैयाँ ६० पैसाबाट बढाएर ० दशमलव ६० डलर अथार्त झण्डै ६६ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
राष्ट्रपतिको फोटो भएको टिर्सट लगाउनु खेलाडीका लागि घातक बन्यो
फागुन ६ – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको फोटो भएको टिर्सट एक जना फुटबल खेलाडीका लागि ठूलो भारी सरह भएको छ । रुसी खेलाडी दिमित्रि टारासोभलाई राष्ट्रपतिको फोटो भएको टिर्सट लगाएकै कारण उनको क्लबले कारबाही गर्ने भएको छ ।
विद्यालयमा प्रवेश गरेर ६ जनालाई आक्रमण गर्ने चितुवा खोरबाट भाग्यो
फागुन ४ – भारतको एक विद्यालयमा प्रवेश गरेर ६ जनालाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको चितुवा भागेको छ । गएको माघ २५ गते बैंग्लोरको एक विद्यालयमा प्रवेश गरेर ६ लाई आत्रमण गरी घाइते बनाएको चितुवालाई त्यसलगतै खोरमा बन्द गरिएको थियो ।
युएईमा खुसी मन्त्रालय
माघ २८ – संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइमा नागरिकलाई खुशी बनाइराख्न भन्दै मन्त्रालय गठन गरिएको छ । युएइ सरकारले खुसी मन्त्रालय (मिनिस्ट्र अफ ह्यापिनेस) बनाएर मन्त्री नियुक्त गरेको छ ।
आफ्नी बहिनीसँग प्रेम गरेको भन्दै १६ वर्षे किशोरले गरे १२ वर्षे बालकको हत्या
माघ २४ – भारतको राँचीमा सात कक्षामा अध्ययनरत १२ वर्षको बालकको हत्या आरोपमा चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बालक अध्ययनरत विद्यालयकी एक शिक्षिका, उनका श्रीमान तथा शिक्षिककी १२ वर्षकी छोरी तथा १६ वर्षका छोरा रहेका छन् ।
‘रुख मान्छे’ को उपचार सरकारी खर्चमा
माघ २२ – रुख मान्छेको रुपमा चिनिएका बंगलादेशका एक व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । हातमा दुवै हातमा ट्युमर (मुसोजस्तै गरी आउने मासुका ससाना डल्ला) पलाएका आबुल बजन्दरको उपचार सरकारी खर्चमा हुने भएको हो ।
नेपालका एक युवाले पेन्सिल मुखमा राखेर बनाए अनौठो विश्व रेकर्ड (भिडियोसहित)
काठमाडौं, माघ २१ – नेपालका एक युवाले एक अनौठो काम गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । १९ वर्षका राजा थापाले आफ्नो मुखमा १ सय ३८ वटा पेन्सिल राखेर विश्व रेकर्ड बनाएका हुन् ।
​जिका भाइरसले कारलाई पनि असर
माघ २० – जिका भाइरससँग मिल्दोजुल्दो नाम भएपछि भारतीय कार कम्पनी टाटा मोटर्सले बजारमा ल्याउन लागेको जिका कारको नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
कम्मरमाथि लुगा नलगाइ हिउँमा सैन्य अभ्यास (तस्बिरसहित)
माघ १७ – अमेरिका र दक्षिण कोरियाका सैनिकले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएका छन् । यही क्रममा अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली सैनिकले माइनस २० डिग्री सेल्यिसय भन्दा कम तापक्रम भएको ठाउँमा कम्मरमाथि लुगा नलगाइ सैन्य अभ्यास गरेका छन् । दक्षिणी कोरियाको ग्यांगोवन प्रान्तको पायोङच्याङको हिउँले ढाकिएको क्षेत्रमा कम्मर भन्दामाथि लुगा नलगाइ सैन्य अभ्यास गरेका हुन् । अभ्यासमा जापानको ओकिनावामा रहेको अमेरिकी सैनिकको मरिन एक्सपेडिसनरी फोर्सको तेस्रो बटालियनका सैनिक र दक्षिण कोरियाका समकक्षी सैनिक सहभागी थिए...
​बाख्राले एकै वेतमा ६ पाठा पाठी जन्मायो
चितवन, माघ १६ - चितवनमा एउटै वाख्राले एकै वेतमा ६ वटा पाठा पाठी जन्माएको छ । चितवनको भरतपुरस्थित कृष्णपुरका आनन्द अधिकारीले पालेको स्थानीय जातको बाख्राले ६ ओटा पाठा पाठी जन्माएको हो ।
२८ वर्षपछि बच्चा जन्मिदा शहरभरी खुसीयाली
माघ १५ – विश्वका हरेक साना गाउँमा दिन दिनै नभएपनि हप्ता, महिना वा वर्ष दिनमा नयाँ बच्चा जन्मिएकै हुन्छन् । विश्वभरमा हरेक सेकेन्डमा ४ भन्दा बढी बच्चा जन्मिने गरेको तथ्यांक छ । तर इटालीको एउटा बजारमा अहिले २८ वर्षपछि बच्चा जन्मिएकोमा त्यहाँका बासिन्दाले खुसी मनाइरहेका छन् ।
बहुविवाह नगर्ने पुरुषलाई जेल सजाय हुने !
माघ १४ – अफ्रिकी मुलुक एरिट्रिया सरकारले आफ्नो देशका पुरुषले अनिवार्य रुपमा कम्तिमा दुई महिलासँग विवाह गर्नुपर्ने नियम ल्याएको खबर सार्वजनिक गरेको छ । एरिट्रिया सरकारले यसरी बहुविवाह नगर्ने पुरुषलाई जेल सजाय गर्ने व्यवस्था सहितको नियम ल्याएको नाइजेरियाको अनलाइन समाचार संस्था व्हिसलरले जनाएको छ । इथियोपियासँगको युद्धको क्रममा देशका धेरै पुरुषको ज्यान गएको र अहिले महिला धेरै तर पुरुष कम भएकाले एक पुरुषले कम्तिमा दुई जना महिलासँग विवाह गर्नु पर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको खबरमा उल्लेख छ । अरब...
फेसबुकका प्रमुख जुकरबर्ग किन एकै किसिमका कपडा लगाउँछन् ?
माघ १४ – फेसबुकका पिता भनेर चिनिने मार्क जुकरबर्गले सधैं एउटै खालका कपडा लगाउँछन् भन्दा सबैलाई आश्चार्य लाग्दो हो । तर यो सत्य हो की अबौं सम्पत्तिका बाबजुद पनि जुकरबर्गले सधैं एकै प्रकारका पोशाक लगाउँछन् ।
आफ्नै लिंग काटे युवकले
रामेछाप, माघ ४ – रामेछापमा एक युवाले आफ्नै लिंग काटेका छन् । रामेछाप नगरपालिका–८ दिङलाका २८ वर्षका श्यामकुमार हायुले सोमबार बिहान आफ्नै लिंग काटेका हुन् ।
शार्ली एब्दोलाई जोर्डनकी रानीको जवाफ
माघ ३ – फ्रान्सको व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दोमा छापिएको एक कार्टुन प्रति जोर्डनकी रानी रानियाले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ । शार्ली एब्दोले आफ्नो एक कार्टुमा एक व्यक्ति महिलाको पिछा गरिरहेको र एलन कुर्दीको नाम लिएर यो बच्चा ठूलो भएपछि के गर्छ ? भनेर सोधेका छन् ।
बुसको पेज ४५ हजार पटक सम्पादित
माघ २ – विकिपेडियामा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पेज सबै भन्दा धेरै पटक सम्पादन भएको छ ।
टाउकोमा दाँत भएको सिंह
पुस २७ – अमेरिकामा टाउनकोमा दाँत भएको सिंह फेला परेको छ । अमेरिकाको आइडाहो राज्यको जंगलमा टाउकोमा पूर्ण रुपमा विकसित दाँत भएको हिमाली सिंह फेला परेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
५ वर्षका बालकले बचाए बुबाको ज्यान
पुस २७ – फ्रान्सका एक पाँच वर्षका बालकले बुबाको ज्यान बचाएका छन् । घरमा बुबा र आफू मात्रै भएका बेला ५८ वर्षका बुबालाई हृदयघात भएपछि रातिको समयमा तीन किलोमिटर लामो ग्रामीण कच्ची सडकमा साइकल चलाएर केभिन डिजेन नाम गरेका बालक सहयोग माग्न गएका थिए ।
​बाँदरले खिचेको सेल्फीमा कपी राइट झमेला
पुस २४ - एउटा बाँदरले खिचेको सेल्फी तस्बिरलाई लिएर अमेरिकामा कानुनी झमेला देखिएको छ । इन्डोनेसियाको एउटा बाँदरले खिचेको सेल्फीलाई लिएर तस्बिरमा अधिकार कस्को हुने भन्दै मुद्दा परेको हो ।